January | 2012 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
When Daw Aung San Suu Kyi comes to Mandalay… (ထားဝယ်ကတော့ မန္တလေးကို စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ !) January 30, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 8:05 am
From General Knowledge
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထားဝယ်မြို့က ဒီလို ကြိုဆိုထောက်ခံခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးကို လာမယ်။
မန္တလေးမြို့က ဘယ်လိုကြိုဆို ထောက်ခံမှာလဲ ?
36 Kaung, A Type of Betting In Burma (သုံးဆယ့်ခြောက်ကောင်) January 29, 2012
Thit-Sa-Wai-Da-Gu Foundation for Youth Culture and Education January 27, 2012
Filed under: MY NEWS,Peace — Nyo Gyi @ 7:49 am
လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပညာရေးဒါန ဖောင်ဒေးရှင်း ဖွဲ့စည်းရန် ဖိတ်ကြားလွှာ
၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း (၈)ရက်
(၃၁-၁-၂ဝ၁၂) အင်္ဂါနေ့
နေ့လည် (၁းဝဝ)နာရီမှ (၅းဝဝ)နာရီအထိ
From Mandalay Thitsa Wai Da Gu Thukha Yeik Myone
Mandalay Cartoon Exhibition 2012 – မန္တလေးကာတွန်းပြပွဲ ၂၀၁၂ (ကာတွန်းများနှင့် သတင်းဗွီဒီယို) January 20, 2012
Filed under: CARTOONS,DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD,Videos — Nyo Gyi @ 5:02 pm
Mandalay Cartoon Exhibition 2012 (Video)
Joke for All
All for Joke
နေရာ – မန္တလေးမြို့၊ ၂၆ လမ်း၊ ၈၆ လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြားရှိ ပဒုမ္မာ ခန်းမ
နေ့ရက် – ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ (၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂)ရက်များ
အချိန် – နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ
Mandalay Cartoon Exhibition 2012 (Cartoons)
အောက်က အင်တာနက်လိပ်စာမှာ ကာတွန်းပုံ ၂၈ ပုံ တင်ထားပါတယ်။
In front of Mandalay Prison (Video) – မန္တလေး အိုးဘိုထောင်ရှေ့ မြင်ကွင်းများ (မူဗီ) January 14, 2012
Filed under: MY NEWS,NLD,Peace,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION,UNITY IS STRENGTH,Videos — Nyo Gyi @ 8:31 am
(Friday 13, January, 2012)
Ma Tin Mar Swe asks Asia-Light Sayadaw about her daughter
Filed under: MY NEWS,Videos — Nyo Gyi @ 8:21 am
ထောင်မှ လွတ်လွတ်ချင်း အာရှအလင်းရောင်ဆရာတော်(ပြင်ဦးလွင်)ထံ
သမီးအကြောင်း အမောတကော မေးနေတဲ့ မတင်မာဆွေ
မန္တလေးထောင်က လွတ်မြောက်လာသူများထဲမှ တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးဖြစ်သူ မုံရွာ၊ တောင်ပလူကျေးရွာက မတင်မာဆွေဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အမျိုးသား ကိုအောင်စိုး ကတော့ ထောင်ထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့အတူ ထောင်ထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်အရွယ် သူ့ကလေးကို မကြာသေးခင်ကမှ အာရှအလင်းရောင်ဆရာတော်(ပြင်ဦးလွင်)က ထောင်ပြင်ကို ထုတ်ခေါ်ယူပြီး ပညာသင်ပေးထားခဲ့တာပါ။
ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ ၁၉၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၁၂၊ ကြာသပတေးနေ့၊ အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၇၈၊ စာမျက်နှာ ၁၄ မှာဖော်ပြထားတဲ့ “မတင်မာဆွေ နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း” ကို မျှဝေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။)
မတင်မာဆွေ နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း
ကျွန်မက ၅(ည)၊ ၅(င)၊ လ၀က ၁၃ နဲ့ကျတာပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ခုနှစ်လပိုင်းမှာ စကျပါတယ်။ ၂၆ နှစ်ချပြီး အထဲမှာ ၈ နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။
လွတ်လာတဲ့အတွက် အပြည့်အ၀ မပျော်ရွှင်ပါဘူး။ အမျိုးသားလည်း လွတ်မလာဘူးလေ။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ရှိသေးတာကို။ ဒါပေမဲ့ အခုလို လွှတ်ပေးတဲ့အတွက် သမ္မတကြီးကော၊ ရေးပေးကြတဲ့ မီဒီယာတွေကိုကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို နားလည်ထားတာကတော့ အန်တီ့မိန့်ခွန်းတွေ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကိုလည်း ဖတ်ရတော့ အားလည်းရတယ်၊ ကျေလည်း ကျေနပ်ပါတယ်။ သို့သော် အထက်က မူချပေးပေမယ့် လူတွေက ပြုပြင်လုပ်မှသာ ဒီနိုင်ငံသည် တိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။